Fifidianana · Novambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Novambra, 2011
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Novambra, 2011
Liberia: Iza moa izany no tena resin'i Ellen Johnson ?
Afrika Mainty 20 Novambra 2011
Mbola nandresy ny fifidianana indray i Ellen Johnson Sirleaf ny Alakamisy teo tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena nokorontanin'ny mpanohitra any Liberia. MItady ny lalana ara-dalàna ny olon'ny mpanohitra, i Winston Tubman, mba hanafoananana ny fifidianana indray ny filoha Ellen Johnson-Sirleaf. Ireto misy santionana tsikera sy hevitra mikasika ny fifidianana avy amin'ny mpiserasera.
Goatemala: Fifandirana momba ny filoha voafidy
Amerika Latina 17 Novambra 2011
Mpianatra maintimolaly nahazo diploma Amerikana sady jeneraly misotro ronono Otto Perez Molina no voafidy ho filoha any Goatemala taorian'ny fifidianana niady tokoa sady nifanipaka be ihany, nefa ny ankamaroan'ny mpifidy dia tsy nifidy na nanao vato fotsy. Sambany teo amin'ny tantaran'i Goatemala no nisy vehivavy, Roxana Baldetti [es] -mpikambana ao amin'ny...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 11 Novambra 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Novambra 2011
Tamin'ny volana Aprily lasa teo, nandidy ny fandravana ny antoko politika nitondra ny firenena nandridra ny taona am-polony maro ny Fitsaràna Ejiptiana. Na izany aza dia mbola mijoro ireo mpikambana tao, ary nanolo-tena ho ao anatin'ny lisitr'ireo kandidà ho an'ny fifidianana parlemanta amin'ny volana Novambra. Jereo fa nifandray tànana ireo mpampiasa aterineto mba hampisehoana izany.
Korea Atsimo : Tsy Nampihemotra Ireo Mpifidy Ny Fampitandremana Natao Tamin'ireo Mpanentana Ao Amin'ny Twitter
Ny Renivohitr'i Korea Atsimo, Seola, ny 26 oktobra 2011 dia nifidy ny ben'ny tanànany vaovao. Ny fiadiana ny toerana maha ben'ny tanàna dia tena ady goavana be teo amin'ilay vehivavy mpilatsaka ho fidiana avy amin'ny antokon'ny fitondrana sy ilay tsy mbola fantatra loatra izay avy amin'ny antoko demokratika. Na dia eo aza ny fampitandremana avy amin'ny manam-pahefana amin'ny fanehoana fiangàrana amin'ny kandidà iray, ireo mpampiasa Twitter anefa dia haingana dia haingana amin'ny fandrisihana ny olona rehetra tsy an-kanavaka hifidy.
Qatar: Nambara Ny Datim-Pifidianana Izay Ho Parlemantera Amin'ny 2013
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 02 Novambra 2011
Androany (01/11) dia nanambara i Qatar ha hanao fifidianana izay ho mpikambana ao amin'ny parlemantany amin'ny tapany faharoan'ny taona 2013. Ny Emir ao Qatar, Shaikh Hamad bin Khalifa Al Thani, no nanao ny fanambaràna ary noraisin'ny vahoaka tsara tokoa, izay manantena fa ny fanohanan'i Qatar ny revolisiona Arabo dia hanefy ampitso vaovao ho an'ireo Qataris.
Kolombia : Fifidianam-Paritra 2011
Amerika Latina 02 Novambra 2011
Ny Alahady 30 oktobra 2001 no natao tao Kolombia ny fifidianam-paritra [teny espaniola] hanendrena izay ho olom-boafidy amin'ny fitantanana raharaham-bahoaka eny ifotony : governora, antenimieram-paritra, ben'ny tanàna, mpanolontsain'ny tanàna, ary ny antenimieran'ireo mpitantan-draharaha eny an-toerana. Arakaraky ny lanjan'ny toerana hofenoina, arahamaso akaiky ireny fifidianana ireny toy ny fanarahana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Mailo tanteraka ny vahoaka mikasika io teboka io, ary izany dia tsapa hatranyt anaty fampahalalam-baovaon'olon-tsotra rehetra any sy eny amin'ny tambajotra sosialy.